Poppy Punch – Kpochapụ ha! Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Poppy Punch – Kpochapụ ha! Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na nchịkwa | Disemba 31, 2021
Poppy Punch bụ egwuregwu ọgụ Poppy! Jiri aka gbagọrọ agbagọ kụpụ onye ọ bụla na mgbanaka ahụ. Naanị otu nwere ike ịbụ onye mmeri!
Gị na ndị ọzọ na-asọ mpi bụ Poppy. Ndị agha niile ga-ezute ihu na ihu na mgbanaka ahụ, na onye ọ bụla ga-alụ ọgụ maka onwe ya! Ọrụ gị bụ ịchụpụ ndị mmegide niile ma nọgide na-abụ ndị ikpeazụ na mpaghara a!
Poppy ọ bụla nwere isi ahụike, ị nwere ike imeri ma ọ bụrụ na i were ha niile, ma ọ bụ kụọ onye iro na mgbanaka ahụ. Maka onye iro ọ bụla meriri, ọkwa gị ga-adị elu, ntụmadị dị ike na ogologo! Kpachara anya ka ndị iro nwere ike ịbanye!
Ọ bụrụ na ị dịla njikere ịbụ onye mmeri Poppy, chụpụ onye ọ bụla n'ọgbọ egwuregwu, ma ọ bụ chụpụ onye ọ bụla, nka bu agha unu! Iwu ndị mara mma dị mfe, ma imeri na mgbanaka adịghị mfe ma ọlị. Kpochapụ ndị iro niile wee nọgide na-alụ ọgụ ikpeazụ n'etiti Poppy.
Atụmatụ Poppy Punch:
– Njikwa joystick dị mfe
– Eserese 3D mara mma
– Ọgụ ọ bụla pụrụ iche
– Mekaniki egwuregwu dị mma
– Egwuregwu egwu egwu
Puku onye ọ bụla nọ na mgbanaka wee bụrụ onye mmeri Poppy! Sonye n'agha wee merie!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Knock, Poppy, Punch
← Mma agha nna ukwu: Ragdoll ọgụ 3D aghụghọ&Mbanye anataghị ikike ZIO na Akwụkwọ Mpịakọta Ime Anwansi Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
Bankrupt Demon King – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Oge mgbapụ na Huggy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Bonbons Crush Akụkọ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike